Umbuzo: Ngaba Kuza Kubakho Incwadi Yesihlanu KuMjikelo Welifa-BikeHike
Ngaba uphelile umjikelo weLifa?
Ngaba u-Eragon uya kuba ngumlinganiswa ophambili kwincwadi yesi-5?
Ngaba iFork, iWitch kunye neWorm yincwadi yesi-5?
Ngaba uChristopher Paolini usebenza kwincwadi entsha?
Mingaphi iminyaka ye-Eragon kwilifa?
Ngaba kukho ulandelelwano lwemuvi i-Eragon?
Ngaba u-Eragon no-Arya baya kuze babe kunye?
Ngaba u-Eragon uya kuze abuyele kwi-alagaesia?
Ngaba uChristopher Paolini uza kubuyela kwi-alagaesia?
Kutheni iShruikan inkulu kangaka?
Wasebezela ntoni uBrom kuEragon?
Wayekhangeleka njani uEragon kwincwadi?
Kutheni imovie ye-Eragon yasilela?
Ngaba uBrandon Sanderson usisityebi?
Yeyiphi eyona ncwadi ithengiswa ngokukhawuleza kulo lonke ixesha?
Mingaphi iminyaka kaMurtagh e-Eragon?
Ngaba u-Arya uthandana no-Eragon?
Mingaphi iminyaka e roran kwilifa?
Ngubani inamba eBomvu kweLidala?
Ngubani inamba kwiqweqwe lomdala?
Ngaba uEragon ngoyena mkhweli wenamba onamandla?
Ngaba u-Eragon ukhe amncamise u-Arya?
Yayingubani igama lokwenyani lika-Eragon?
Ngaba uMurtagh uyayithanda i-nasuada?
Emva kweminyaka ephantse ibe sixhenxe, uChristopher Paolini uya kube ekhupha incwadi yakhe yesihlanu kungcelele oluthi Umjikelo weLifa onesihloko esithi, Ifolokhwe, iGqwirha, kunye neNtshulube. Inoveli yefantasy eya kuba nokwandiswa kwesakhiwo kunye nabalinganiswa iya kufumaneka e-US ukusuka nge-31 kaDisemba 2018, nase-UK ukusuka nge-1 kaJanuwari 2019.
Incwadi yesine neyokugqibela kolu ngcelele, iLifa, yapapashwa nguKnopf ngoNovemba 8, 2011. Olu luhlu luthengise iikopi ezizigidi ezingama-33.5 kwihlabathi jikelele.
U-Eragon/uSaphira akayi kuba ngabalinganiswa abaphambili kwiNcwadi V.
Ngaba iFork, iWitch, kunye neWorm yiNcwadi yesiHlanu ekudala kuxoxwa ngayo othe uya kuyibhala? Hayi. Ifolokhwe, iGqwirha, kunye neNtshulube ngumqulu wokuqala wongcelele olutsha lwamabali amafutshane asetwa kwihlabathi laseAlagaësia.
Inoveli entsha yentsomi yesayensi kaPaolini, Ukulala kuLwandle lweenkwenkwezi, yakhutshwa nge-15 kaSeptemba 2020, yiTor Books. Ukwaceba ukubuyela kwihlabathi lase-Alagaësia nencwadi yesihlanu xa egqiba incwadi yakhe yenzululwazi.
Ekupheleni kweLifa, u-Eragon uneminyaka elishumi elinesixhenxe ubudala. Wayishiya iCarvahall xa wayeneminyaka elishumi elinesihlanu kwaye wagqiba iminyaka elishumi elinesithandathu ngexesha lokuzingela kwakhe iRa'zac.
Ukulungelelaniswa kwe-2006 ye-Eragon ayinayo i-sequel kwaye akukho zicwangciso zokuba i-franchise iqhubeke. Ekuqaleni, bekukho izicwangciso zokulandelelana ezimbini, kodwa ngenxa yokungamkeleki kakuhle kwefilimu yokuqala, ezi zicwangciso zaye zacinywa, kunye ne-franchise enokwenzeka.
Ngokwemvelo, abaninzi "abathumeli beenqanawa" be-Eragon / Arya baphazamiseka ukuba isibini asizange siphele kunye. “Into ekufuneka uyikhumbule kukuba uthotho luphelile, ibali lika-Eragon no-Arya liza kuqhubeka. Baza kuphila ixesha elide kakhulu, kwaye ubudlelwane babo busekude ukuphela.” Feb 15, 2017.
I-Eragon ayikwazi ukubuyela e-Alagaesia. Kodwa ukuba ulangazelelo lwakhe Arya kuchaphazela yena enenough ukutshintsha ubuntu bakhe ngokuphawulekayo, ngoko uya kuyeka ukuba umntu ekwaprofetwa ngaye (kwaye ra'zac uqalekisiwe).
Ibilude, uhambo oluhle kakhulu olulandela i-adventure yase-Eragon kunye ne-Saphira, kwaye abantu abaninzi baye bazibuza ukuba ingaba uChristopher uya kuze abuyele kwihlabathi lase-Alagaësia. Ewe, uya kwenjenjalo! Enyanisweni, uChristopher unezicwangciso zexesha elizayo zezinye iintsomi ezininzi zase-Alagaësian!.
Ngoncedo lukaMorzan, uGalbatorix weba uShruikan emva kokuba ebulele umkhweli wakhe wokwenyani. Wajija ingqondo yenamba encinci ngomlingo onamandla oMnyama, ukuze uShruikan asebenze njengenamba entsha yaseGalbatorix. I-Galbatorix isebenzise umlingo ukukhawulezisa ukukhula kukaShruikan, kumenza abe mkhulu ngobukhulu.
UBush wenza iYazuac Massacre, iqinisekisiwe. “Eragon, nyana wam. Ndinguyihlo.”
I-Eragon ichazwa ngokuba neenwele ezimdaka kunye namehlo amdaka. U-Eragon wayeneenwele ezibomvu kunye namehlo aluhlaza. U-Eragon wayeneminyaka elishumi elinesihlanu ekuqaleni kwebali. U-Eragon wayeneminyaka elishumi elinesixhenxe ekuqaleni kwebali.
Esinye sezizathu zokuba imuvi isilele silula: Ifilimu ye-Eragon yayahluke kakhulu kwibali lokuqala. Imiba emininzi yomboniso bhanyabhanya yayisisizathu sokungaphumeleli kwayo: Njengoko bekutshiwo ngaphambili, omnye wemiba ephambili, kutheni le filimu yaphoswa, kungenxa yokuba iyelenqe lahluke kakhulu kwincwadi.
Ixabiso likaBrandon Sanderson: UBrandon Sanderson ngumbhali waseMelika onexabiso le-6 yezigidi zeedola. UBrandon Sanderson wazalelwa eLincoln, Nebraska ngoDisemba 1975. UBrandon Sanderson Net Worth. I-Net Worth: I-6 yezigidi zeedola zesini: Umsebenzi wobudoda: uMbhali, uMbhali weSizwe: i-United States of America.
Eyona ncwadi ithengiswa ngokukhawuleza kwimbali nguHarry Potter kunye ne-Deathly Hallows, eyesixhenxe - neyokugqibela - inoveli kuthotho lukaJK Rowling's (UK) Harry Potter, othengise iikopi ezizigidi ezisi-8.3 kwiiyure ezingama-24 zokuqala (okanye iincwadi ezingama-345,833 ngeyure), ilandela ukukhutshwa kwayo e-USA ngo-00.01 nge-21 kaJulayi ka-2007.
UMurtagh wayeyindoda enestoyiki, eneminyaka elishumi elinesibhozo ubudala. Amehlo akhe anoburhalarhume ayenziwe ngamaqhaga eenwele zakhe ezinde ezimdaka ngebala. Wayechetywe kakuhle, esukiwe kakuhle, enezihlunu, kwaye mde kancinane kunomntakwabo ngonina, uEragon.
Kwilifa, u-Arya wasabela kakuhle kumdlalo wesibini owenziwe nguye ngu-Eragon kwaye watshintshana namagama okwenyani kunye naye. Kwisahluko sokugqibela sale ncwadi, wayeka konke ukuzenza okwethutyana, ebonisa ukuba uyamthanda.
URoran naphi na phakathi kweminyaka elishumi elinesixhenxe/iinyanga ezisibhozo kunye neminyaka elishumi elinesibhozo kunye neenyanga ezintlanu.
ULiva yayi inamba ebomvu eyindoda, ebotshelelwe eMurtagh. Wayeqeqeshelwe ukulwa nguShruikan kwaye ngexesha leMfazwe yamaThafa avuthayo wayekwazi ukuphefumla umlilo. UMeva wayelichule lokulwa emoyeni, ekwazi ukukhuphisana noSaphira, kwanaxa wonzakele kakhulu.
Elona qweqwe lidala lase-USA uhlelo lokuqala, elibonisa inamba ebomvu uMbhali weLiva uChristopher Paolini Dewey idesimali [Fic] 22 LC Class PZ7.P19535 El 2005 Yandulelwa ngu-Eragon.
Ngokuqhelekileyo ungoyena mdala okanye unamandla kunabo bonke abakhweli, kodwa akahlali ehlakaniphile (njengoko uVrael wayeyiNtloko yeDragon Rider, kodwa ngokutsho kweGalbatorix, u-Oromis wayesisilumko). I-Eragon yokuqala, i-Anurin, i-Vrael kunye ne-Eragon Shadeslayer bonke babeyiNtloko ye-Dragon Riders kwaye ngabona baziwa kakhulu kuthotho.
Hayi, u-Eragon no-Arya abamanga kwiLifa. Emva kokuba uKumkani uGalbatorix enqotshiwe, baxubusha ikamva labo kunye, kodwa banquma ukuba kunjalo.
Igama lokwenyani lika-Eragon ngu-Hiro Gary-Stu uMmeli oMkhulu weXXIII. @paolini bollocks.
Nangona wayengcungcuthekiswa, uthando lukaMurtagh olukhulayo ngoNasuada lwaluza kumvumela ukuba amkhusele kangangoko wayenako ngokuchasene nezixhobo zokumkani ezingcungcuthekisayo. Nangona wayemcekisa ekuqaleni, kamva wafudumala kuye waza waqalisa ukumxolela njengoko wayekuphela kweqabane lakhe.
Impendulo eKhawulezayo: Ithini iNcwadi yesi-4 kuMjikelo weLifa obizwayo
Iza Kuphuma nini Incwadi yesi-5 yoMjikelo weLifa
Umbuzo: Ngaba uMjikelo weLifa ulungile
Impendulo eKhawulezayo: Ngubani obhale uMjikelo weLifa
Ude Kangakanani Umjikelo Welifa
Zingaphi Iincwadi ezikuMjikelo weLifa
Impendulo eKhawulezayo: Zingaphi Iincwadi ezikuLuhlu loMjikelo weLifa
Impendulo eKhawulezayo: Zingaphi Iincwadi Ezikhoyo kuMjikelo weLifa
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba ndingakhupha iOvulation ngomhla wesihlanu woMjikelo wam
Umbuzo: Yayiyintoni Incwadi eluhlaza
Ngaba uChristopher Paolini ufuna iTV Series yeLifa leMjikelo
Impendulo eKhawulezayo: Ngubani Obhale Incwadi ethi Intente Ebomvu
Okulandelayo Post: Quick Answer: What Hotels Can You See The Ball Drop In Nyc